घरमा रोप्नुहोस् यो बिरूवा, जसले घरमा कहिले पैसाको अभाव हुन दिँदैनन् « गोर्खाली खबर डटकम
घरमा रोप्नुहोस् यो बिरूवा, जसले घरमा कहिले पैसाको अभाव हुन दिँदैनन्
काठमाडौँ । संसारका सबै चीजहरू ऊर्जाको साथ जोडिएको छ र वरपरको उर्जाले हाम्रो जीवनलाई पनि असर गर्दछ । वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता धेरै उपायहरू उल्लेख गरिएको छ, जुसले घरमा सकारात्मक उर्जा ल्याउँदछन् र सुख, समृद्धि र शान्ति कायम गर्दछन् ।वास्तुमा हरेक बोट बिरुवाको आफ्नै महत्व हुन्छ । केही बोटहरूले घरबाट नकारात्मक उर्जा हटाउँछन्,
त्यसपछि त्यहाँ केही बोटहरू हुन्छन् जसले घरमा पैसाको अभाव हुन दिँदैनन् । धेरैलाई पैसाको लागि मनी प्लान्ट स्थापना गर्ने बारे थाहा हुन्छ, तर अर्को प्लान्टलाई पैसाको लागि वास्तुमा भनिएको छ । यसलाई क्रासुलाको बिरुवा भनिन्छ ।यसको पूरा नाम क्रासुला ओभाटा हो । यसलाई जेड ट्री, मैत्री रूख, भाग्यशाली रूख र पैसाको रूख पनि भनिन्छ । वास्तुमा क्रासुलाको बोटलाई धन सम्पत्ति पनि भनिन्छ ।
त्यहाँ क्रासुलाको बिरुवा रोप्नको लागि सही दिशा पनि छ । किनकी गलत दिशामा लगाइएको यस बोटले पैसाभन्दा नोक्सान निम्त्याउन सक्छ ।क्रासुलाका पातहरू बाक्लो तर धेरै नरम हुन्छन् । यो बोट एकदम छिटो फैलिन्छ । यसको पातहरू हल्का हरियो र हल्का पहेंलो रंगका हुन्छन् । यस बोटलाई धेरै घामको आवश्यकता पर्दैन । यो छायाँमा बढ्छ । वसन्त ऋतुमा, यसमा साना सेता वा गुलाबी फूलहरू फूल्छन्,
जुन हेर्नको लागि धेरै सुन्दर देखिन्छ ।क्रासुलाको बोटपनि सुन्दर देखिन्छ । यसको पातहरू धेरै बलियो र लचिलो हुन्छन् । क्रासुलाको बोटलाई पनि धेरै हेरचाह आवश्यक पर्दैन । त्यसैले तपाईं यसलाई सजिलै घरमा राख्न सक्नुहुनेछ ।
यस बोटको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो चाँडै सुक्दैन। हप्तामा दुई वा तीन पटक पानी हाल्नु पर्याप्त छ । यस बोटले धेरै ठाउँ लिँदैन, त्यसैले यो साना भाँडामा पनि रोप्न सकिन्छ।वास्तुशास्त्रकाअनुसार क्रासुलाको बोटले घरमा सकरात्मक उर्जा बढाउँदछ । यस बोटलाई राख्दा घरमा धनसम्पत्ति बढ्ने विश्वास गरिन्छ । यस बोटले घरतर्फ धन ल्याउँदछ । यदि पैसा तपाईंको घरमा धेरै समय बस्दैन भने तपाईं क्रासुला पनि लगाउन सक्नुहुन्छ
कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ।प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले हेर्ने हो भने हाम्रा पुर्बजहरूले हामीलाई सम्हाल्न सक्ने भन्दा बढी सम्पती दिएर गएका छन्। हाम्रो तराइले हामी सबैलाई प्रसस्त खुवाएरबङगलादेशमा निर्यात गर्न सक्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सक्छ, तर हामी खेतिको ज्ञानबाट बंचित छौ र गरीब छौ।
गलत धारणा हो, हाम्रो आफ्नो कुसंस्कार हो, हाम्रो आफ्नो आलशीपन हो, हाम्रो आफ्नो दुर्गतिशील बिचारधारा हो। हाम्रो भोतिक कंगालपन हाम्रो बैचारिक कंगालपनको प्रतिबिम्ब मात्र हो।हामी यति कंगाल छौ कि आफ्ना पुर्बजहरुले कमाईदिएको अमुल्य मणिलाई, नचिनेर ढुङगा सरह ठान्छौ।
सब्बथ संबरो भिक्खु सब्ब दुख्ख पमुच्चति।दुख्खे याणं, दुख्ख समुदय ञाणं, दुख्ख निरोधे ञाणं, दुख्ख निरोध गामीनि पटिपदाय ञाणं।दुख्खे याणं, दुख्ख समुदय ञाणं, दुख्ख निरोधे ञाणं, दुख्ख निरोध गामीनि पटिपदाय ञाणं।दुख के हो जान्नु, दुखको उत्पति जान्नु, दुखको बिनास जान्नु, र दुख बिनास गर्ने बिध्या जान्नु।शिद्दार्थ गोतम जीबनका दुखलाई देखेर ती दुखबाट छुटकारा पाउने बिध्या खोज्न हिडेका थिय।
छ बर्षको खोजि पछि उहांले दुख नास गरने बाटो पत्ता लगाएको ऐलान गर्नु भयो र त्यो बाटोमा हिड्न सिकाउदै हिड्नु भयो। आज आफुलाइ बिद्वान मान्दै हिड्नेहरु, बिषयको जानकारी बिना प्रतिकृया दिन मन पराउछन्, तर बुद्धको मातृभुमिमा उहांको शिक्षाको बारेमा जान्ने मान्छेहरु नगन्य मात्रामा छन।
नेपाल आइडल-३ विजेता सज्जा चौलागाईंलाई हार्दिक बधाई !